Maxay dadka gurran la gaar yihiin? | Radio Himilo
Home / Habka-Nolosha / Maxay dadka gurran la gaar yihiin?
Maxay dadka gurran la gaar yihiin?
Posted by: Mahad Mohamed June 24, 2020
Himilo – Sida aalaba raad-galku ku arooro, wuxuu ku raarmaa ugu yaraan run ahaantiisa.
Balse waxaa jira siyaalo dhowr ah oo dadka gacanta bidix wax ku qora oo Soomaalidu u taqaan Gureey loogu tilmaami karo dad fariid ah. Mid kamid ah siyaalahan waa hal-fikirka ama kartida ay kusoo karaariyaan aragti cusub oo ku saleysan xog dhabta.
Taas waa marka loo eego cilmi-baaristii 1995 uu sameeyey sychologist-gii Stanley Coren taas oo dhawaanahan ay dib u ifisay New Yorker article. Coren wuxuu tilmaamay tijaabooyin dhowr ah oo soo jeediya in dadka gurani ay leeyihiin karti-sarreysa oo hal-fikir ah, ugu yaraan ragga.
Coren wuxuu awooday in si dardar ku jirto uu ku kala dhigo maagalnimada ah in gureeyaashu ku fariidsan yihiin, qeyb ahaan, ku agaasimista shaqadooda fikirka saxda taas oo ka imaanaysa inay aqoonta ku jirta iyo xeerarka ay ku jaangooyaan jawaabta saxda ah.
Coren ayaa sharaxaday sida dadka gurani ay ugu badan yihiin dhinacyada xisaabta, farshaxanka, qaabeeyaasha dhismaha iyo kuwa dubnadda ciyaara
Previous: Wakiilka Grealish “ Majiraan wadahadallo uu laacibka kula jiro Man United.”
Next: Man City oo hoggaamineysa tartanka loogu jiro Koulibaly